Akwụkwọ Christopher Faust Martech Zone |
Edemede site na Christopher Faust kwuru
Christopher Faust kwuru
Christopher bu oru n’iile ahia ahia nke uwa, mmepe ahia, na uzo ahia Qvidian. Dika onye isi ahia ahia zuru oke na ngalaba ihe omuma banyere ngalaba teknụzụ, Christopher na-ewetara ụlọ ọrụ etolite etolite.
Akwụkwọ Ahịa Ahịa Ahịa & Oge Ọhụrụ Na-ere
Tuesday, June 9, 2015 Tuesday, June 9, 2015 Christopher Faust kwuru
N'ebe ire ere taa, imerime ihe ịma aka nwere ike igbochi ndị ndu azụmaahịa inyere ndị otu ha aka imezu ebumnuche ha. Site na ngwa ahia ohuru na-adaba iji wepu usoro, ndi na-ere ahia na-etinyekwu oge na oru nhazi na obere oge ire. Iji mee ka uto dị ngwa, belata arụmọrụ n'ime otu nzukọ ma belata ntụgharị na ahịa, ndị isi ahịa ga-ehiwe usoro dị agile na mgbanwe. Digital Sales Playbooks bụ ihe dị mkpa